प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईलाई कुन धुन मन पर्छ, म वजाउँछु, तपाई नाच्नुहोला – Pokhara Voice
By पोखरा भ्वाइस	 On ११ बैशाख २०७७, बिहीबार १२:५०
गोकुल काण्ड लगत्तै अगाडी बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरण सेलाउन नपाउँदै वालुवाटारको आफै वसेको जग्गा तपाईकै अर्का प्रियपात्रले हत्याएको कुरा पनि । नेपाली उखान छ नि “मेरो कम्मरको खुकुरी कुन हुुस्सुुले चोर्यो भने झै । प्रधानमन्त्री सुत्ने पलङ्गमुनिको जग्गा अर्कैको नाममा हुँदापनि कानमा तेल हालेर वस्ने । अन्यथा नलागो प्रधानमन्त्री ज्यु यो देशमा तपाई भन्दा हुस्सु अर्को कोहि होला र ? यो विषयमा पनि जनता वोले तपाईलाई कर्कस नै लाग्यो । वरु भन्दिनुुस् न तपाईलाई प्रियलाग्ने सुमधुर धुन कुनहो म पनि वजाईदिउला , कम्तिमा तपाँई पोखरा आउँदा पनि नाच्नु होलानी? अनि के प्रधानमन्त्री ज्यू त्यो ३३ कीलो सुनकाण्डको मुख्य दोषी को हो भन्ने अहिलेसम्म पत्ता लागेन है । सुन काण्डका क्रममा मारिएका तिनजनाको परिवारको रोधनपनि तपाईलाई कर्कस नै लागेको होलानी है । त्यसोत निर्मला हत्याकाण्ड र वर्तमान राष्ट्रपतिका श्रीमान जसको जगमा तपाई भित्ताहरुमै किननहोस् नयाँयूगको घोषणा गर्नु भयो उनको हत्यारा कहिले पत्तालाग्ला है । खासमा भन्ने हो भने म नेकपामा भोट हाल्ने भएकै मदन भण्डारी र मनमोहनको सिद्धान्त र जिवनयापन हेरेरनै हो । अहिले मैले यो कुुरा गरे भने त झन् ठुुलो कर्कस आवाज निस्कन्छ होला । एक पटक कान जचाउने हो कि प्रधानमन्त्री ज्यू जनताको आवाज कर्कस किनलागेको होला भनेर ।
एक भोटरका हिसावले र आमनागरिकका हिसावले मलाई राम्रै सँग थाहा छ तपाई भ्रष्टाचारमा लिप्तहरुलाई कार्वाही गर्नु हुन्छ तर पनिकानुन नै संशोधन गरी यती होल्डिङलाई सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा दिनुभयो । कानूनै संशोधन गरी यती समुहलाई राज्य कोषमा ५ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने गरी नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिएको काण्डले मेरै दल नेकपा भित्रै खैलाबैला मच्चियो तर तपाँई टसको मस हुनुभएन। जनताले आबाज उठाए तपाईले उत्कृठ जोक्स हाल्नुभयो । हामी त्यहि जोक्सलाई आत्मसाथ गरेर वस्यौं । प्रधानमन्त्री ज्यूू तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको छ , एक अरव रुपैयामा एक को पछाडी कतिवटा सुुन्य हुन्छन ? सायद तपाईले सोच्नु हुदैन किनभने तपाईले त आफ्नो सवै सम्पती आफ्नो शेष पछि राष्ट्रका नाममा दिनुभएको छ । त्यसैले तपाइको लागि तपाई प्रधानमन्त्री हुँदा पाउने तलव र तपाईको श्रीमतीको ३३ वर्षको जागिरे कमाईनै प्रयाप्त हुन्छ । तपाँईको यो कमजोरीलाई तपाईका वरिपरी रहने चुण्ड र मुण्डहरुको झुण्डले राम्ररी बुुझेका छन् त्यसैले तपाईलाई मनपर्ने धुन वजाईदिए तपाई त्यसैमा नाच्दै मख्ख पर्नु भयो ।